आयात घटाएर निर्यात बढाउन आवश्यकः अध्यक्ष राणा « Farakkon
आयात घटाएर निर्यात बढाउन आवश्यकः अध्यक्ष राणा
दाङ, चैत ९ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले देशको समृद्धिका लागि आयात घटाएर निर्यात बढाउन आवश्यक रहेको बताएकी छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लव दाङले तुलसीपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष राणाले समृद्धिका लागि निर्यात बढाउन कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ ? भन्ने कुरामा राज्य स्पष्ट हुनुपर्ने बताएकी हुन् ।
कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सरकारले त्यही अनुरुप लगानीको वातारण निर्माण गर्नुपर्ने उनले भनाइ छ । वाणिज्य संघ विकासको सवालमा सरकारसँग सँगसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको उनले बताइन् । तर त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण सरकारले निर्माण गर्न आवश्यक रहेको राणाको जोड थियो ।
राज्यले आवश्यक कानुन निर्माण र नीतिगत कुराहरु निर्माणमा समयमै ध्यान दिन नसक्दा हाल तीन तहका सरकारको बीचमा करका सम्बन्धमा केही अन्यौलता सिर्जना भएको हुँदा त्यसले अप्ठेरो भएको धारणा राखिन । ‘लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिला वातावरण खोज्छ । राज्यले त्यो व्यवस्था गर्न सकेमा मात्रै विदेशी लगानी भित्रिन्छ’, अध्यक्ष राणाले भनिन् ।
आर्थिक विकासको लागि कर प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्ने उनले बताइन् । आर्थिक विकास र लगानी भित्र्याउने सवालमा वाणिज्य संघले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्दै आएको राणाले बताइन् । फरक प्रसङ्गमा वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष राणाले पछाडि परेका क्षेत्रहरुको विकास नहुँदासम्म देशमा समृद्धि भएको मान्न नसकिने बताइन् ।
‘अब समृद्धिको यात्रा दाङ, रोल्पा, रुकुमजस्ता क्षेत्रहरुवाट सुरु गरिनु पर्छ’, अध्यक्ष राणाले भनिन् ‘विकासित स्थानमा मात्रै विकास गर्नुलाई विकास मान्न सकिदैन ।’ विकासबाट पछाडि पारिएका पहाडी क्षेत्रहरुमा विकासको राम्रो सम्भावनमा रहेको हुँदा कृषि, पर्यटनमा लगानी गर्ने वातावरण राज्यले तयार गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
दाङ पहाडी जिल्लाहरुको प्रवेशद्वार भएको भन्दै उनले स्र्वद्वारीसम्म केवुलकारको विकास गर्नुपर्ने धारणा राखिन । त्यसो हुन सकेमा छिमेकी देश भारतबाट र आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा बृद्धि हुने उनको भनाइ छ । सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनले धेरै सकारात्मक प्रभाव पर्ने आशा गरेकी उनले त्यसको भरपुर लाभ कसरी लिने ? भन्ने सवालमा सरकार योजनाका साथ प्रस्तुत हुन आवश्यक रहेको बताइन् ।
पर्यटन वर्षको कुरा गरेर नथाक्ने सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट र सडकहरु राम्रो बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । हाल मुलुकमा स्थिर र बलियो सरकार आएको हुँदा अब आर्थिक समृद्धिको लागि प्रयास हुने राणाले आशा व्यक्त गरिन् ।